Indlu encinci yamatye eMonts d'Arrée
Embindini weMonts d'Arrée, eParc d'Armorique, thatha ithuba lendawo yale ndlu intle yamatye enemiqadi eveziweyo, yalungiswa kwindlwana ezolileyo. Uya kuba kwindawo okanye kufutshane neendlela ezininzi zokuhamba nokuba uhamba ngeenyawo, ngebhayisekile yeentaba, okanye ukhwele ihashe, ngenxa yendawo ephakathi, uya kundwendwela ngokulula iindawo eziphambili zeFinistère.
Ilungele izibini (kunye nomntwana omncinci: ibhedi)
abalungele 2 / 3pers: kitchen zinakho (eziko, microwave, njengesicocisi, efrijini / efrijini) / igumbi okudlela / igumbi abaphila ne iinkuni esitovini, wi-fi intanethi, lokuhlambela umabonwakude ishawa Italian kunye kumatshini wokuhlamba - ilinen emhlophe, zangasese eyahlukileyo, 1 lokulala kwi-mezzanine nge-1 ibhedi 140. + idesksi (ibhedi eyongezelelweyo ngesicelo).
Ilinen yokulala inikezelwa ngesicelo sokuhlala iveki okanye ngaphezulu (ii-euro ezi-5 ezongezelelweyo ukuba zifuneka ngaphantsi kweveki).
Ifestile yeBay ukuya emazantsi evula kwi-terrace, ifenitshala yegadi, ibarbecue.
4.57 ·Izimvo eziyi-135
4.57 · Izimvo eziyi-135
Embindini weMonts d'Arrée, kwiParc d'Armorique, thatha ithuba lendawo yale ndlu intle yamatye enemiqadi eveziweyo, yalungiswa kwindlwana ezolileyo kwilali encinci enabemi abayi-1287.
Ngokuhlala e Cottage wethu, wena kwisiza okanye kufutshane kwiindlela ezininzi ukunyuka intaba enoba ngeenyawo, bike intaba, okanye ihashe: unako kwakhona ngokukhawuleza ukuya lwamawa i Monts d'Arrée (3 min), kwi ihlathi likazwelonke le-Huelgoat (i-15 min), kwi-bay ye-Morlaix (i-15 min) kwaye ngenxa yendawo yayo ephakathi, uya kutyelela ngokulula iindawo ezinkulu zaseFinistère.
Ungalibazisi ukuba unayo nayiphi na imibuzo, izicelo zolwazi ... kanye apho okanye ngaphambi kokufika kwakho ... nokuba kunge-imeyile, umyalezo okanye ngokobuqu ....